तर हामीले सुनेको छौ नि घुसघुसे मान्छे भित्र भित्रबाट अलि कपटी हुन्छ भनेर । शायद म पनि त्यस्तै थिए होला । केटी साथीहरुसँग त्यती मेरो बोलचाल नभए पनि म एउटी केटीलाई भित्र भित्र बाट नै मन पराउठे । खै त्यति खेर मलाई नै के हुन्थ्यो, त्यो केटी सँग आँखा जुध्न पुग्दा पनि मलाई एक दमै लाज लागेर आउथ्यो । अनि म आँफै आफ्नो नजर झुकाउथे । तर पनि म त्यो केटीलाई आफ्नो छबी देखाउन कहिले के कहिले के गरी रहन्थे । तर यो पनि थाहा हुँदैन थियो कि त्यो केटीले मेरो क्रियाकलाप प्रति गौर गरेर हेरेको छ कि छैन भनेर । त्यही पनि म केही न केही गरी नै रहन्थे ता कि उनको नजरमा म पर्नु सकू । त्यति खेर गाइघाटको सिनेमा हलमा हिन्दी फिल्म “दिलवाले” चलिरहेको थियो । त्यो फिल्मको अन्तिम पटकको सिनमा नायक अजय देवगनले गरेको स्टन्डले मलाई गहिरो छाप छोडि सकेको थियो । उक्त सिनमा नायकले माथि उडिरहेको तलवारलाई उडेर खुट्टाले हानेर विलेनलाई मारेको छ । यदी तपाईंहरुले पनि यो फिल्म हेर्नु भएको छ गौर गरेर हेर्नु होला ।
This entry was posted on शनिवार, जुन 13th, 2009 at 11:5 and is filed under "सस्मरण".	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
“मेरो पहिलो माया” का4वटा प्रतिक्रियाहरु
manju भन्नुहुन्छ:	जुन 13, 2009 मा 11:5	bhai tapaiko pahilo maya man paryo ,tara maya chahi sima ho ki bijaya ho ni?
जवाफ फर्काउनुहोस् SANTOSH SHRESTHA भन्नुहुन्छ:	जुन 28, 2009 मा 11:5	yo ta jhan mitra ekdami super fantastic mind blowing rahe6.I like it more than 100%
जवाफ फर्काउनुहोस् bibek भन्नुहुन्छ:	जुलाई 10, 2009 मा 11:5	Dai Tapai ko Pahelo maya Ramro Lagyo. Shachhi Nai pahelo Maya Vaneko Pahelo Nai Rahechha.I also felling that
जवाफ फर्काउनुहोस् raju rai भन्नुहुन्छ:	जुलाई 10, 2009 मा 11:5	hi santosh G and bibek bhai